घुम्टो ओढेर बसेको रेलको कथा :: भानुभक्त :: Setopati
कसैलाई उद्घाटन गर्न मन लाग्यो भनेर जबरजस्ती गर्न मिल्दैन: महाप्रबन्धक भट्टराई
तपाईंको निर्देशनअनुसार जनकपुरमा रेल त चलेन नि? सेतोपाटीको प्रश्नमा मन्त्री नेम्वाङले भने, 'होइन, त्यहाँ कर्मचारीहरूको तालिम सकिएन। त्यही भएर ढिला भयो। अब २५-२६ गतेतिर तालिम सकिएपछि यही महिनाबाट रेल चलिहाल्छ।'
'ल्याउनुअघि नै समस्या भएर हामीले रेल छ महिनासम्म बिहारको सोनपुरमै राखेका थियौं। पछि ल्यायौं तर समयमै चाहिने जति सबै निर्णय गर्न सकेनौं। त्यही भएर ढिला भएको भयै छ,' मिश्रले भने।
'सुरूमा हामीले रेल किनेको भारतको कोंकण कम्पनीले नै रेल चलाउने र मर्मत-सम्भार गर्ने प्रस्ताव गरेका थियौं। त्यो प्रस्तावअनुसार काम भएको भए रेल त्यतिबेलै चलिहाल्थ्यो। पछि सरकारले महँगो हुने भयो भनेर तत्काललाई रेल मात्र किन्ने निर्णय गर्‍यो,' मिश्रले भने, 'त्यसपछि रेल त आयो तर जनशक्ति भएन। प्राविधिक जनशक्ति नभएपछि चलाउन सकिने कुरा भएन।'
'मैले नियुक्ति लिएको अर्को दिन मेरो कार्यालयमा न पियन थिए न त चिया खाने पैसा थियो,' भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने, 'सबै जनालाई रेल आयो अब ड्राइभर बसेर चलाइहाल्छ भन्ने थियो। रेल चलाउन त्यति सजिलो विषय होइन भन्ने कसैले बुझेको देखिएन।'
'विज्ञापन गरेदेखि लोकसेवाले रोकुन्जेलसम्म धेरै समय लाग्यो। त्यताबाट नमिलेपछि मैले ज्यालादारीमा कर्मचारी राखेँ,' भट्टराईले भने, 'फेरि प्राविधिक कर्मचारीलाई तालिम नदिइकन हुँदैन। अहिले उनीहरूको तालिम भइरहेको छ।'
'त्यसपछि पनि रेल चलाउन समय लाग्छ,' भट्टराईले भने, 'सबै प्राविधिक रूपमा ओके नभइकन मिल्दैन।'
'हामीले पहिला जे कुरा गर्ने प्रस्ताव गरेका थियौं, त्यही कुरा अहिले फेरि नेगोसिएसनको लामो प्रक्रिया पूरा गरेर उहाँहरूले गर्नुभएको छ,' रेलवे विभागका पूर्वमहानिर्देशक मिश्रले भने, 'सुरूमै रेल किन्ने र चलाउने जिम्मा पनि भारतीय कम्पनीलाई दिएको भए रेल त्यतिबेलै चलिहाल्थ्यो।'
रेल चलाउने विषयको 'नेगोसिएसन' सिधै नेपालको रेलवे कम्पनी र कोंकणले गर्न पाउँदैनन्।
'हामीलाई एकदम छिटो गर्नुपर्ने कुरा चिठी लेखेर पठाउँदा परराष्ट्र हुँदै भारतीय दूतावास पुग्नै हप्तौं लाग्छ,' मिश्रले भने, 'म महानिर्देशक हुँदा एकचोटि सिधै भारतीय दूतावासमा पत्र लेख्दा झन्डै स्पष्टीकरण दिनु परेको थियो।'
यो रेलवे स्टेसन भएको लगभग तीन सय विघा जमिन नेपालले राणाकालमै भाडामा लिने सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार नेपालले बि.सं. १९९४ देखि जनकपुर-जयनगर रेल चलाएको थियो। पुरानो 'न्यारोगेज' रेलमार्ग हटाएर अहिले त्यहाँ 'ब्रोडगेज' रेलमार्ग बनाइएको हो।
'भारतीयहरूले पुरानो सम्झौता छोडिदिनुस्, हाम्रो भूमिभित्रको स्टेसन हामी चलाउँछौं, त्यसको सुरक्षा पनि हामी नै हेर्छौं भनेर निहुँ खोज्न थाल्नुभयो,' रेलवे विभागका एक जना अधिकारीले भने, 'राणाकालमा भइसकेको सम्झौता अहिले आएर मान्दैनौं भन्न मिल्दैन भनेर हामीले अडान राखेपछि पछि उहाँहरू तयार हुनुभयो।'
'उहाँहरूले हाम्रो पनि भूमिका हुनुपर्छ भन्नुभएको छ। उद्घाटनमा अब प्रधानमन्त्री मोदी नै आउनु हुने हो कि त्यसबारे अहिले नै केही खुलिसकेको छैन,' स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो, 'भारतका प्रधानमन्त्री वा मन्त्री आउने भएपछि उहाँहरूलाई कहिले टाइम मिल्छ, त्यहीअनुसार हामीले पनि मिलाउनु पर्छ।'
'पहिला त ग्राउन्डमा सबै कुरा प्राविधिक रूपले ओके हुनुपर्छ। १३ सय मान्छे चढ्ने रेल कसैलाई उद्घाटन गर्न मन लाग्यो भन्दैमा जबरजस्ती गर्न मिल्दैन,' भट्टराईले भने, 'त्यसैले म अहिले नै यो मितिमा रेल चल्छ भन्न सक्दिनँ। महिना दिनभित्र चलाउने लक्ष्य राखेर काम गरिरहेको छु।'
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार १६, २०७८, ०४:५२:००